Answering Your Questions about McKnight's Vibrant & Equitable Communities Program - McKnight Foundation
Tuulada Hmong waa meel caan ah oo ay isugu yimaadaan dadka deegaanka ee Hmong (Juun, 2018). Astaanta Sawirka: Molly Miles
Kajawaabida Su'aalahaaga ee kusaabsan Barnaamijka Bulshooyinka firfircoon & sinaanta ee McKnight
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah su'aalaha iyo jawaabaha la xiriira McKnight's Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah (Jaaliyadaha) barnaamijka. Macluumaad dheeri ah, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso Jaaliyadaha xeeladaha barnaamijka iyo tilmaamaha dalabka, and aragti tan webinar macluumaad ah, kaas oo aanu martigelinay Diisambar 2021, kadib sannadkii ugu horreeyay ee barnaamijka.
Waxbarashada iyo Gobolka & Bulshooyinka-Diirada Leh Deeqaha
La Xiriirka Kooxda Bulshooyinka
1. Immisa wareeg oo deeq-bixinno ah ayaa jira sannad kasta?
Kooxdayadu waxay dib u eegaan weydiimaha waxayna casuumaan soo jeedimaha saddexdii biloodba mar. Wax -weydiintu waxay ku eg tahay Janaayo 15, Abriil 15, Luulyo 15, iyo Oktoobar 15. Waxaan hadda aqbalnaa weydiimaha wareegga maalgelinta Oktoobar. Weydiimaha u gudbaya heerka soo jeedinta oo dhammaystiran wareeggan waxaa lagu tixgelin doonaa kulankayaga guddiga ee Febraayo 2022.
2. Waa maxay muddada la filayo deeqda? Ma sameysaa deeqo sannado badan ah?
McKnight wuxuu caadi ahaan sameeyaa deeqo hal ama laba sano ah. Waxaan si dhow ula shaqeyneynaa ururka codsanaya si loo go'aamiyo labadaba nooca deeqda (howlaha guud, mashruuca, barnaamijka, iwm.) Iyo muddada deeqda. Haddii aad su'aalo qabtid, fadlan la xiriir a xubin ka tirsan shaqaalaha barnaamijka ka hor intaadan gudbin codsigaaga deeqda.
3. Waa maxay miisaaniyaddaada deeq-lacageed?
Miisaaniyadda deeqda ee barnaamijka Bulshooyinka ee 2022 waa $32 milyan. Sababtoo ah qaar ka mid ah doolarkaas ayaa mar hore u heellan deeq -bixiyeyaasha sannadaha badan, waxaan filaynaa inaan u dirno qiyaastii $17.5 milyan deeqaha cusub sannadka 2022 -ka.
4. McKnight miyuu u qoondeyn doonaa $15 milyan oo miisaaniyadda deeqaha ah si isku mid ah afarta wareeg ee deeqda ah?
Ma qoondaynno qayb go'an oo ka mid ah lacagaha deeqda rubuc kasta. Taa bedelkeeda, kooxdayadu waxay ka shaqaysaa hubinta inaan samayno qadar macno leh oo doolar deeq ah oo la heli karo rubuc kasta. Marka la eego baaxadda deeqda, ma jirto wax faa iido ah in la codsado horaanta sannadka iyo goor dambe.
5. Noocee deeqo ayaa la heli karaa-hawlgal guud, deeqo barnaamij, kuwa kale?
Barnaamijka Bulshooyinka wuxuu si joogto ah u casuumaa deeqaha guud ee hawlgalka iyo barnaamijka/mashruuca labadaba. Marar dhif ah, waxaan tixgelineynaa codsiyada raasumaalka. Haddii aad haysato codsi raasumaal, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad ku xirto a xubin ka tirsan shaqaalaha barnaamijka ugu yaraan lix bilood ka hor intaadan u baahnayn maalgelin.
6. McKnight ma tixgelin doonaa deeqaha qorsheynta barnaamijka?
Haa, waxaan tixgelin doonaa deeqaha loogu talagalay qorshaynta barnaamijka iyo hirgelinta.
7. McKnight ma tixgelin doonaa maalgelinta mashaariicda cilmi baarista, ama barnaamijyo adeegyo toos ah oo dheeri ah?
McKnight wuxuu maalgeliyaa hawlo kala duwan, laga bilaabo abaabulka bulshada ilaa cilmi baaris, falanqeyn, iyo qorsheyn. Waxaan sidoo kale maalgelinnaa u -doodista iyo hirgelinta siyaasadda aan xisbiyada ahayn. Hase yeeshee, sida caadiga ah ma maalgelino adeegyada tooska ah ama kuwa aadanaha.
8. Ma loo baahan yahay in la helo maalgelin u dhiganta?
Waxaan eegeynaa miisaaniyadda ururka oo dhan waana ka mahadcelineynaa marka ururradu aqoonsadaan ilaha taageerada ee kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, uma baahnin maalgelin u dhiganta.
9. Waa maxay noocyada ururada u qalma?
Marka laga reebo wax yar oo ka reeban, codsadayaashu waa inay Adeegga Dakhliga Gudaha ku tilmaamaan cashuur-dhaaf, ururada aan macaash doonka ahayn inay u-qalmaan deeq. Hay'adaha dawladda, oo ay ku jiraan gobolka, degmada, iyo degmada, ayaa codsan kara maalgelinta mashaariicda hal -abuurka leh. Guud ahaan ma maalgelin doonno waxqabadyo caadiyan ah mas'uuliyadda keliya ee dawladda. Xiriir Renee Richie, barnaamijka iyo deeqaha kuxiran, yaa kugu xiri kara a xubin ka tirsan shaqaalaha barnaamijka si aad uga jawaabto su'aalaha gaarka ah ee ku saabsan xaaladdaada.
10. Sidee ayuu McKnight ugu talo galay inuu ku maalgeliyo iskaashatooyinka deeqaha hantida bulshada, maadaama iskaashatooyinka badankood yihiin hay'ado macaash doon ah?
Waxaan danaynaynaa sahaminta moodooyinka cusub ee lahaanshaha wadaagga ama iskaashiga. Caadi ahaan, maalgelintayadu waxay taageeri doontaa dadaallada iskaashi ee aan macaash doonka ahayn. Si kastaba ha ahaatee, waxaan tixgelin karnaa inaan siino xoogaa taageero ah hay'ado macaash doon ah oo si cad uga qayb qaata dhisidda hantida bulshooyinka hantida yar leh iyo/ama bulshooyinka BIPOC. Taageero kasta oo loogu talagalay hay'ad macaash doon ah waa inay la jaanqaaddaa shuruudaha sharciga ee khuseeya.
11. Haddii aan haysto kafaala-qaade, ma dalban karaa deeq?
Waxaan tixgelineynaa codsiyada ururada ay maalgeliso. Ururada, mashaariicda, ama barnaamijyada leh kafaala -qaade maaliyadeed waa inay la xiriiraan a xubin ka tirsan shaqaalaha barnaamijka ka hor soo gudbinta baaritaan maaliyadeed.
12. Ma la wadaagi kartaa waxaad u jeeddo adoo ka wada shaqeynaya gobolka oo dhan? Taasi macnaheedu maahan goobo badan? Sideed u aragtaa in deeq-lacageedkaaga loo qaybiyay Minneapolis – St. Paul metro iyo Greater Minnesota?
Barnaamijka Jaaliyadaha waxaa ka go'an inuu la shaqeeyo deeq -bixiyeyaasha iyo la -hawlgalayaasha dhammaan magaalooyinka iyo magaalooyinka Minnesota. Ma hayno jadwalka maaliyadeed ee go'an ee gobolka gobolka. Waxaan soo dhaweyneynaa oo dhiirigelineynaa soo jeedinta ka timid Greater Minnesota waxaana rajeyneynaa inaan dhisno xiriirada maalgelinta gobolka oo dhan
13. Ma cadeyn kartaa eraybixinta ku saabsan maalgelinta Minnesota? Ururku ma inuu saldhig ka dhigtaa Minnesota, mise wuxuu noqon karaa meel ka baxsan gobolka illaa iyo inta ay ka leedahay barnaamijyo khuseeya Minnesota?
Inta badan maalgelinta barnaamijka Jaaliyadaha waxay taageertaa ururada ku salaysan Minnesota. Si kastaba ha ahaatee, waxaan dib -u -eegeynaa codsiyada ka imanaya la -hawlgalayaasha ka baxsan Minnesota oo ka shaqeynaya inay taageeraan bulshooyinka firfircoon iyo sinnaanta ee gobolkeenna. Waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto a xubin ka tirsan shaqaalaha barnaamijka si looga wada hadlo shaqadaada.
14. Ma waxaad dooneysaa inaad maalgaliso ururro iyo mashaariic aad u dhisan, dadaallada cusub, ama isku darka?
Barnaamijka Jaaliyadaha ayaa maalgeliya codsiyo isku jira oo ka imanaya wada -hawlgalayaal cusub iyo ururo xiriir taariikhi ah la leh McKnight.
15. Ma maalgelin doontaa hay'adaha dhexdhexaadinta ah? Maxay yihiin fikradahaaga ku saabsan maalgalinta shaqada bulshada heer dhexdhexaad ah oo ka soo dhow dhulka?
McKnight wuxuu inta badan la shaqeeyaa dhex -dhexaadiyayaal kala duwan oo aad ugu dhow hoggaanka hoose. Sidaa awgeed, waxaan soo dhaweynaynaa soo jeedinta ururada dhexdhexaadinta. Dhexdhexaadiyayaashu waxay inta badan ka faa'iidaystaan ilaha deeq -bixinta dheeraadka ah, waxay bixiyaan deeqo iyo raasumaal kale, waxay ku bixiyaan kaalmo farsamo gudaha goob shaqo, waxayna ka qaybgalaan oo qaabeeyaan hababka kor u qaadaya saamaynta dhulka.
Ka sokow dhex -dhexaadinta maalgelinta, waxaan tixgelineynaa codsiyada maaliyadeed oo si toos ah uga imanaya la -hawlgalayaal cusub oo dhulka u dhow kuwaas oo shaqadoodu horumariso yoolalka barnaamijkeenna. Waxaan ku dhiiri gelinaynaa hay'adaha aan macaash doonka ahayn inay codsadaan xitaa haddii dhex -dhexaadiyaha gobolkaaga ama beeshaada uu horay u helay maalgelin, waxaanan ku talinaynaa inaad la xiriirto xubin ka tirsan shaqaalaha barnaamijka si looga wada hadlo shaqadaada.
16. Sidee ayuu McKnight u arkaa soo jeedimaha khuseeya wax ka badan hal barnaamij oo ka socda McKnight, sida isku -dhafka u dhexeeya barnaamijka Jaaliyadaha iyo barnaamijka Cimilada & Tamarta Midwest?
Waxaan si dhow ula shaqeynaa xubnaha shaqaalaha barnaamijyada kale ee McKnight, sida Farshaxanka iyo Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest, waana soo dhaweyneynaa soo jeedimaha isku xira barnaamijyo badan. La xiriir a xubin ka tirsan shaqaalaha barnaamijka hagitaan ku saabsan habka ugu fiican.
17. Miyaad si gaar ah u maalgelinaysaa ururada ku jira Madowga, Asaliga, dadka midabka leh (BIPOC) barnaamijkan cusub? Boqolkiiba abaalmarinnada ma loo qoondeyn doonaa ururrada diiradda-saara Madow?
In kasta oo McKnight ay ka go'an tahay kordhinta taageerada uu siinayo ururrada ay hoggaamiso BIPOC, waxaan sii wadnaa inaan maalgelinno la-hawlgalayaal dhaqammo kala duwan leh oo ay ku jiraan dhammaan bulshooyinka ugu yeera guriga Minnesota. Sannadkiisii ugu horreeyay, in ka badan kala badh deeq bixiyayaasha barnaamijkeennu waxay isu aqoonsadeen inay BIPOC hoggaamiso.
18. Sideed u qeexaysaa ururka BIPOC ama BIPOC uu hoggaamiyo?
McKnight wuxuu ku qeexayaa urur “BIPOC hogaaminayo” mid leh ugu yaraan afar ka mid ah lixda sifo ee soo socda:
50% ee shaqaalaha sare waxaa lagu aqoonsaday BIPOC
50% ee xubnaha guddiga waxaa loo aqoonsaday BIPOC
Ururku wuxuu leeyahay hoggaan BIPOC (fulin ama heer sare)
Hawlgalka kooxdu wuxuu si cad diiradda u saarayaa bulshooyinka BIPOC
Mashruuca ama hindisaha waxaa hogaaminaya inta badan xubnaha kooxda BIPOC
Ururku wuxuu hirgelinayaa dadaallada DEI iyo/ama ku -wareegga kala -guurka urur si loogu helo sinnaan weyn barnaamijka ama hawlgallada
19. Ma tixgelin doontaa soo jeedimaha ka hadlaya sinnaanta bulshada iyo xalalka cimilada ee wada socda?
Haa, waxaan soo dhaweynaynaa soo jeedinno is dhexgala aagag barnaamijyo badan oo McKnight ah. Fadlan la xiriir a xubin ka tirsan shaqaalaha barnaamijka si looga wada hadlo shaqadaada iyo hagitaanka gudbinta baaritaanka.
20. Waa maxay faraqa u dhexeeya Bulshooyinka iyo barnaamijkii hore ee Gobolka & Jaaliyadaha?
Waxaan aragnaa saddex khilaafaad muhiim ah oo la xiriira diiradeena iyo tilmaamaheena:
Barnaamijka cusub wuxuu si ula kac ah diiradda u saaraa gobolka oo dhan.
Waxaan ka mid nahay xoojinta ka-qaybgalka dimuqraadiyadda oo ah istiraatiijiyad muhiim ah.
Waxaan sii xoojineynaa balanqaadkeena hogaamiyaasha jaaliyadaha ay aadka u saameeyeen kala duwanaanshaha midab, dhaqan, iyo dhaqaale ee Minnesota.
21. Sidee ayey ufurantahay aasaaska soo jeedinta u aragta waxbarashadu inay tahay mid kabaal marinaysa dhaqaajinta dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha, kaqaybqaadashada dimuqraadiyada, ama hantida bulshada? Deeqaha nidaamyada wax ma ka beddelaan waxbarashada K-12 ma yihiin kuwo ku habboon?
Waxaan ku faraxsanahay la-hawlgalayaasheenii hore ee deeq-bixiyeyaasha deeqaha iyo horumarka ay sameeyeen. Maaddaama aan nahay urur maalgeliya, waxaa nalooga baahan yahay inaan gaarno go'aanno adag, oo mid ka mid ah uu ahaa inaan joojino diiradda aan saarnay carruurnimada hore iyo waxbarashada K-12. Haddii aad dareento in shaqadaadu ay la jaanqaadayso waxyaabo kale oo ka mid ah tilmaamaheena cusub ee barnaamijka, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad la xiriirto a xubin ka tirsan shaqaalaha barnaamijka.
22. Ururkeennu kuma dhaco afarta istaraatiijiyadood ee maaliyadeed (dhaq-dhaqaaqa dhaqaalaha, hantida bulshada, guriyeynta, iyo ka-qaybgalka dimoqraadiyadda), laakiin waxaa laga yaabaa inuu ku yeesho saamayn waddada ku haysa dhammaan iyada oo ay ugu wacan tahay diirad-saarkeenna waxbarashada. Miyaad kaliya maalgelinaysaa ururada si gaar ah wax uga qabta hal ama in ka badan afartaas aag, mise waxaa jira dabacsanaan?
Marka la eego baaxadda codsiyada maalgelinta, waxaan mudnaan siineynaa ururrada ka shaqeeya afarta aag ee istaraatijiyaddeena. Haddii aad dareento in shaqadaadu la mid tahay kuwan, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad la xiriirto a xubin ka tirsan shaqaalaha barnaamijka si aad ugala hadasho fikradahaaga.
23. Waa maxay xiriirka ugu fiican ee codsiyada deeqda?
Waxaan kugu casuumeynaa eegno codsiyada bogga McKnight.
24. Miyaan u baahanahay inaan la hadlo xubin ka tirsan shaqaalaha barnaamijka ka hor intaanan dalban?
Haa, waxaan kugula talineynaa inaad kala hadasho weydiintaada a xubin ka tirsan shaqaalaha barnaamijka. Renee Richie kaa caawin kara inuu kugu xidho xubin kooxda ka mid ah.
25. Ka warran haddii aan ahay deeq -bixiye hadda? Goorma ayaan dalbanayaa maalgelin cusub?
Haddii aad u codsaneyso maalgelin ujeeddo la mid ah deeqdaada hadda, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad codsato marka deeqdaada hadda jirta ay tahay mid cusboonaysiin ah.
26. Immisa jeer ayuu ururkayga dalban karaa hal sano gudaheed? Haddii deeq nala siiyo, ma soo gudbin karnaa codsi kale muddo kale?
Si loo yareeyo shaqada ururkaaga loona caawiyo McKnight maaraynta codsiyada badan ee aan helno, urur waa inuu codsadaa lacag hal mar sanadkiiba. Mararka qaarkood, duruufaha, sida fursadaha cusub ama caqabadaha taagan, ayaa laga yaabaa inay soo bandhigaan sabab dib loogu dalbado mar kale. La xiriir a xubin ka tirsan shaqaalaha barnaamijka haddii aad rumeysan tahay inay jiri karto cudurdaar ku filan codsi dheeri ah.
27. Ma jiraa codsi deeq ugu badan?
Ma jiro qaddar codsi oo ugu badan. Waxaan kugula talineynaa inaad kala hadasho heerka taageerada aad u baahan tahay a xubin ka tirsan shaqaalaha barnaamijka ka hor intaadan gudbin baaritaan.
28. Deeq -bixiyeyaashu ma kula yeelan karaan deeqo badan hal mar?
Deeq-bixiyeyaashu waxay lahaan karaan deeqo badan isla mar ahaantaana, in kasta oo aan doorbidno inaan yareyno culeyska maamul ee saaran McKnight iyo xubnaha shaqaalaha ee deeqaha siiya hal deeq oo midkoodna bixisa taageerada guud ee hawlgalka ama maalgelinta mashaariic badan isku mar.
29. Waa maxay jadwalka waqtiga qiyaasta ah laga bilaabo soo gudbinta weydiinta hore ilaa aqbalaadda soo jeedinta?
Kooxdu waxay dib u eegis ku sameysaa soo jeedinta waxyar kadib marka la gaaro waqtiyada kama dambeysta ah ee baaritaanka: Janaayo 15, Abriil 15, Luulyo 15, iyo Oktoobar 15.
Weydiimahaas oo u gudba marxaladda soo-jeedinta oo dhan waa la ogeysiinayaa oo la weydiisanayaa inay soo gudbiyaan alaabada oo leh waqti kama dambeys ah sida caadiga ah saddex illaa afar toddobaad ka dib xilliga ugu dambeeya ee baaritaanka.
Guddiga McKnight ayaa markaa dib u fiiriya talooyinka deeqda ee kulanka guddiga xiga ee la qorsheeyay.
30. Maxaa dhacaya inta u dhexeysa arjiga iyo tixgelinta ugu dambeysa ee guddiga? Ma jiri doontaa booqashooyinka goobta muddadaas?
Waxaan u xilsaari doonaa a sarkaalka barnaamijka codsi deeq kasta oo la casuumay. Sarkaalkaas ayaa la xiriiri doona si uu ugala hadlo soo jeedintaada.
31. Haddii baaritaankeyga hore la dooran waayo, ma u sii gudbin doontaa wareegyada mustaqbalka?
Weydiimaha si toos ah looma gudbiyo wareegyada mustaqbalka. Haddii aan helnay baaritaan si wanaagsan ula jaanqaaday tilmaamaha maaliyadeena laakiin ka baxsan awoodeena maalgelinta inta lagu gudajiro wareeggaas, waxaan tixgelin doonnaa horumarinta hindisaha illaa rubuca xiga waxaanna si toos ah ula xiriiri doonaa codsadaha. Annagu hore u socon mayno weydiimaha aan ku habboonayn tilmaamahayaga ama si fiican ugu habboon sababo kale.
32. Haddii aan loo dooran in la siiyo deeq, ma jiri doontaa fursad lagu helo jawaab celin 1: 1 ah? Waa maxay habka dabagalka?
Xaqiiqdii. Haddii aan kugu martiqaadin inaad soo gudbiso soo jeedin buuxda, waa lagugu soo dhaweynayaa inaad jadwal u sameysato waqti aad kula hadasho a xubin ka tirsan kooxda.
33. Shaqaale shaqsiyeed miyaa loo qoondeeyey mid kasta oo ka mid ah afarta xeeladood—dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha, hantida bulshada, guryaha, iyo kaqaybqaadashada dimuqraadiyadda?
Waqtigan xaadirka ah, ma jiro xubin shaqaale oo loo cayimay aag kasta. Kooxda Bulshooyinka guud ahaan dib -u -eegista waxay ku deeqaan dhammaan xeeladaha.
34. Haddii aan ku cusub nahay McKnight Foundation, waa kuma qofka shaqaalaha ugu fiican ee lala hadli karo?
Fadlan la soo xiriir Renee Richie waxayna kuu jiheyn doontaa qofka saxda ah ee baahidaada ah.
35. Sideen ula socon karaa cusboonaysiinta?
The Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah bogga ku yaal bogga McKnight waa meesha ugu fiican ee laga helo macluumaadka ugu dambeeyay.
Mawduuca: Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah
McKnight Waxa uu Xoojiyaa ka qaybgalka Dimuqraadiyada ee Deeq-bixinta Rubuc-Kowaad
Webinar: Ka tarjumaysa Sannadka Koowaad ee Bulshooyinka Firfircoon & Sinaanta
McKnight Waxa uu Ben Hecht ku soo dhaweeyay lataliyaha sare ee booqashada